New Mac mini oo leh M1X iyo isku xira sida iMac sida uu qabo Prosser | Waxaan ka socdaa mac
New Mac mini oo leh M1X iyo isku xira isku mid ah iMac sida uu qabo Prosser
Jon Prosser wuxuu dhowaan ku dhiiraday inuu sharraxaad ka bixiyo waxa mustaqbalka Apple Watch noqon doono wuxuuna noo sheegayaa in howlaha maqalka ee bilaa khasaaraha ah imaan lahaa AirPods iyada oo la cusbooneysiinayo. Waxaas oo dhan waa inaan sugnaa, laakiin hadda wuxuu iskudayay inuu saadaaliyo sida mustaqbalka Apple Mac mini noqon doono. Waxay horeyba uga digtay inay noqon doonto mashiin buuxa oo buuxa maxaa yeelay wuu la imaan doonaa cusub Chip M1X iyo xeedho magnetic sida iMac-ka hadda jira iyo kan cusub.
Fiidiyowgiisii ​​ugu dambeeyay, Jon Prosser wuxuu ku andacoonayaa in Mac mini-ga soo socda ee M1X uu sidoo kale soo bandhigi doono jiil cusub oo naqshad warshadeed u sameysan Apple kaligeed Mac ah. Moodelkan waxaa la filayaa inuu beddelo cirifka sare ee cirifka Intel Mac mini ee safka, oo leh M1 Mac mini oo ah mashiinka heerka gelitaanka. Mac mini 2021 ayaa soo bandhigi doona a jiif cusub leh dusha sare oo milicsiga "Plexiglas-like" ah
Qalabka M1X ayaa u oggolaan doonta Apple inay mar labaad bixiso dekedo dhan, oo ay ku jiraan afar dekedo USB4 / Thunderbolt 3, laba USB-A, Ethernet, iyo HDMI. Waxay u adeegsan doontaa isla qaab isku xiraha korantada birlabta ee Apple ka soo baxday iMac M1. Prosser wuxuu qiyaasayaa in dhamaadka sare ee muraayadda u eg ay macnaheedu noqon karto in Apple ay bilaabeyso noocyo kala duwan oo midabyo midabkeedu yahay qaabkan gaarka ah. Sidan oo kale waxaan lahaan doonnaa aragti guud oo udhaxeysa kombiyuutarada calaamada tufaaxa. Chip cusub oo leh midabbo cusub.
Un warbixintii usbuucii la soo dhaafay ee Bloomberg waxay soo jeedisay in mac mini-ga cusub uu soo bandhigi doono gen-xiga Apple Silicon oo leh 8 geesood oo waxqabad sare leh iyo 2 geesood oo wax ku ool ah. Waxay sidoo kale taageeri doontaa ilaa 64GB RAM waxayna soo bandhigi doontaa haadyo badan oo Thunderbolt ah oo taageeraya dekadaha IO ee la ballaariyey. Qalabkan ayaa sidoo kale la filayaa inuu ka muuqdo cusbooneysiinta soo socota ee 16-inji MacBook Pro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » New Mac mini oo leh M1X iyo isku xira isku mid ah iMac sida uu qabo Prosser
Waxaan rajeynayaa in midkan ay xallin doonaan dhibaatada shaashadaha dibedda ku fashilmay waana inaad soo bixisaa oo aad gelisaa hdmi, maxaa yeelay kiiskeyga arrintu waxay billaabaysaa inay xoogaa daasho.
Apple TV 4K wuxuu qarxiyay muuqaalka wuxuu muujinayaa sahlanaanta dayactirka. Remote Siri wuxuu helayaa midka ugu xun
Soo-saareyaashu waxay awood u yeelan doonaan inay ku iibiyaan rukumo gudahood Kooxaha Microsoft ee Mac-ga ah